New Snapdragon 888: Njirimara na nkọwa | Gam akporosis
Snapdragon 888 bụ onye ọrụ gọọmentị ma jiri ike dị ukwuu bịa maka njedebe dị elu nke 2021
Ndị kasị ike chipset na dum gam akporo ilekota bụ ebe a, onye na-abịarute dethrone na Snapdragon 865 -a nke ya Gụnyere ihe dị iche- dị ka nke nyere arụmọrụ kacha mma. Na ajụjụ, anyị na-ekwu maka ya Snapdragon 888, nke ekwesịrị ịmalite na ahịa n'okpuru aha Snapdragon 875, mana ọ pụtaghị n'ụzọ ahụ. N'otu ụzọ ahụ, nke a na-abịa na nke kachasị mma nke kachasị mma iji bụrụ anụ ọhịa nke ga-akwadebe njedebe dị elu na ọkọlọtọ site na ọnwa a na n'ime afọ 2021.
Akụkụ nke processor a chipset na-elekwasị anya kachasị, na mgbakwunye na arụmọrụ n'ozuzu, bụ nke foto, njikọta 5G na egwuregwu. Àgwà ya dị ịtụnanya, ma lee, anyị na-akọwapụta isi CPU ọhụrụ ndị anyị kọwara n'ụzọ zuru ezu karịa n'okpuru, n'etiti ihe ndị ọzọ.
Qualcomm Snapdragon 888 Atụmatụ na Nka na ụzụ nkọwa
Maka ndị na-ebido ebido, mpempe ọhụrụ a ma ọ bụ, aha ya dị mma, ikpo okwu mkpanaka nwere nodu nha nke 5 nm, nke bụ ụkpụrụ ọhụrụ anyị ga-ahụkarị na-arụ ọrụ dị elu n'ọdịnihu na arụmọrụ nke chipset. Ihe owuwu a na-enye ikike ike dị ala karịa nke SoC ndị ọzọ na-enye nke nanometers dị elu, yabụ enwere nnwere onwe nwere mmetụta dị mma. Nke a na-emetụtakwa nha nhazi, nke pere mpe, yana ọsọ ọsọ data, nke dị elu.
Obere nchegbu, arụmọrụ na arụmọrụ ike ruru 25% elu, ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ bu ụzọ Qualcomm chipsets. Nke a bụkwa n'ihi isi nhazi nke CPU na-etu ọnụ, nke kewara n'ime ụyọkọ atọ ma ọ bụ dị ka ndị a:
A Cortex X1 isi clocked na 2.84 GHz na 1 MB nke oghere L2.
Anọ atọ Cortex A78 cores kụrụ na 2.4 GHz na 512 KB nke L2 cache (maka nke ọ bụla).
Quad Cortex A55 cores kụrụ na 1.8 GHz na 128 KB nke oghere L2 (maka nke ọ bụla).
Na nke a anyị ga-agbakwunye 4 MB nke kesara L3 cache, ewezuga 3 MB nke cache nke processor nke raara nye naanị sistemu.
Snapdragon 888 ije
N'aka nke ọzọ, gbasara Adreno 660 GPU GPU, nke bu eserese eserese nke Snapdragon 888, Qualcomm kwuru na ruru 35% ngwa ngwa karịa onye bu ụzọ ụzọ SoC GPU ma were 20% obere ike, nke na-enyekwara nnwere onwe aka ịgabiga ala. Ọ bụrụ na anyị agbakwunye na nke a na onye nrụpụta semiconductor ga-enye ya mmelite nke oge na nke onwe ya na nhazi ahụ, anyị ga-eche na anyị na-eche GPU ihu na ọtụtụ ihe anyị ga-enye, na ogologo oge.
Dị ka ọ mere na Snapdragon 765G -ọ bụghị na Snapdragon 865-, ohuru Snapdragon 888 biara na modem 5G agbakwunyere, ya mere smartphone ọ bụla na-eburu ya ga-adaba na netwọk 5G n'ụwa niile. Snapdragon X60 5G bụ modem nke nhọrọ maka ụdị ọrụ a, na nke, n'ezie, dakọtara na netwọ 2G, 3G na 4G LTE, yana usoro njikọta dị elu dịka Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E na Bluetooth 5.2.
A na-akpọ engine nke AI nke Snapdragon 888 780 Hexagon, na ọ bụ akụrụngwa na-ahụ maka inye aka na-aga nke ọma ọrụ niile na usoro metụtara Amamịghe echiche, ntụgharị na ndị ọzọ. Ọ nwere ike ịhazi ọrụ tera 26 kwa nkeji, nke bụ ihe jọgburu onwe ya na arụmọrụ ma na-akwa emo maka arụmọrụ tera 15 kwa nkeji nke Snapdragon 865 nwere ike iru. Arụpụta dị obere, dịka Qualcomm si kwuo.
Dabere na foto, nke bụ otu n'ime isi ihe kachasị amasị anyị niile, anyị nwere nnukwu akụkọ kwesịrị ịkọwapụta. Site na ikpo okwu a, 8K mkpebi vidiyo ndekọ abanyelarịrị, nke anyị ahụlarị na emebere na ụfọdụ mobiles dị elu n'afọ a. Ihe ndekọ vidiyo vidiyo 4K, n'aka nke ọzọ, ka mma, ka enwere ike itinye ya na HDR n'otu oge maka ISP (ihe nhazi ihe oyiyi) Spectra 580 nke Snapdragon 888.
Ebe a kwa A na-eme ka ihe ndekọ vidiyo 4K dị mma na okpokoro 120 kwa nkeji, ihe anyị hụkwara na mbụ, ma na ugbu a na-ekwe nkwa na ọ ga-aka mma ma kwụsie ike site na uru nke ikpo okwu mkpanaka na ISP Spectra 580. Ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịlele etu atụmatụ ndị a niile na ndozi si emetụta omume mgbe ọ abịa na-ewere foto, nke anyị ga-achọpụta n'oge na-adịghị anya.
N'akụkụ egwuregwu, enwere ndakọrịta na ọnụego ume ọhụrụ dị elu ruo 144 Hz, ihe kachasị mkpa maka egwuregwu egwuregwu royale, ọ bụ ezie na ọ nweghị nke nwere ike ịrụ ọrụ na ọnụego ume ọhụrụ a, mana n'ezie ihe karịrị otu ga-enweta mmelite iji Were uru nke arụmọrụ processor ma nye gị ahụmịhe kachasị mma. Ọzọkwa ụfọdụ nsogbu ndị ọzọ dị ka laten na aka nzaghachi edozila; ebe a ka anyị gosipụtara nke ahụ nzaghachi ihe eji eme ihe ga-emezi 10% na egwuregwu 120fps, 15% na egwuregwu 90fps, na 20% na egwuregwu 60fps.
N'aka nke ọzọ, Snapdragon 888 nwekwara onye na-ahụ maka nchekwa ya, dịka onye nrụpụta ahụ si kwuo, ga na-enyocha nzuzo na nchekwa oge niile, iji nye oke izo ya ezo maka nchekwa onye ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Snapdragon 888 bụ onye ọrụ gọọmentị ma jiri ike dị ukwuu bịa maka njedebe dị elu nke 2021
Disney na Vodafone sonyeere ike iji mepụta Neo, smartwatch ụmụaka